आजदेखि मुग्लिन सडक पुनः ६ घन्टा बन्द गरिने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आजदेखि मुग्लिन सडक पुनः ६ घन्टा बन्द गरिने
बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१ मा प्रकाशित !
चितवन, जेठ ४ गते । चितवनको मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाले आजदेखि पुनः ६ घन्टा बन्द गरेर काम गर्ने भएको छ । वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै वैशाख २५ देखि जेठ ३ गतेसम्म १० दिन बन्द नगरेको आयोजनाले आजदेखि नियमितरुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागेको हो ।
PREVIOUS POST Previous post: कान्तिका नेपालकै पहिलो नगर प्रमुख
NEXT POST Next post: dsfgsdf
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ ४, २०७४ ०७:२१